सुनको भाउ बढोस्, नूनको भाउ नबढोस् ! | BikalpaNews.com- the most popular online magazine of Nepal
Home Breaking News सुनको भाउ बढोस्, नूनको भाउ नबढोस् !
साउन ३० गते । नून खानालाई स्वादिलो पार्नलाई मात्रै हैन हाम्रो स्वास्थ्यको हिसावले पनि धेरै अपरिहार्य नै मानिन्छ । हरेक खानाहरुमा नुनलाई आवश्यकता अनुसार उपभोग गरिनै रहेका हुन्छौ । नून एउटा रासायनिक यौगिक हो नूनलाई सोडियम क्लोराइड (रासायनिक सुत्र Nacl ) भनिन्छ । नूनले हाम्रो शरीरमा आवश्यकता अनुसार आपूर्ति गर्न सकेन भने मृगौलाले हाम्रो शरीरमा पानीको मात्रालाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन र हाम्रो शरीरमा अनेकौं रोगहरु देखा पर्न थाल्छन ।
त्यसैले नून भनेको हामी सबैको पँहूचमा हुने हुनुपर्छ । आजभोली हाम्रो बजारमा सुनको भाउ दिनानुदिन आकासिएको छ तर सुनको भाउ बढदैमा केही पनि असर पर्दैन । नुनको स्थानमा सुनले केही पनि आवश्यकता पुरा गर्न सक्दैन सुन त एउटा देखावटीपन मात्रै हो सुन लगाउने भन्दा पनि गुण लगाउने मान्छे कैयौं गुणा बढी राम्रो हुन्छ ।
सुनले त बाहिरी सुन्दरतालाई केही समय पुरा गर्ला तर त्यसले भोक तिर्खा नै मेटाउन सक्दैन । स्वस्थ्यको हिसावले न कुनै काम नै गर्छ । सुन त एउटा विलासी बस्तु हो यो भए पनि हुन्छ नभए पनि आपत हुँदैन तर नून त्यस्तो बस्तु हो यो अनिवार्य आवश्यक मानिन्छ ।
पोषणविद्हरुका अनुसार नुन एउटा वयस्क मानिसको दैनीक खानामा ३ देखि ८ ग्राम सम्म हुनुपर्ने मानिन्छ । तर सुनको त यति नै आवश्यक भनेर कसैले पनि भनेको हुँदैन । सुन प्रायः विवाह, ब्रतवन्ध र तीज जस्ता कार्यहरुमा अत्याधिक रुपमा लगाउने चलन छ । अझै केही वर्ष यता त सुन लगाउन तछाडमछाड नै गरेको पाईन्छ ।
यो समाजका लागि विकृति हो । कसले के लगायो, कसले कति तोलाको लगायो, हो यस्तै अनावश्यक कुराहरुमा बढी केन्द्रित रहेको देखिन्छन । अझ यस्तो कार्यमा महिला दिदी बहिनीहरुको सक्रियता बढी रहेको छ ।
यस्तो यो संस्कार हैन समाजलाई कलङ्क बनाउने कार्य हो अवका दिनमा सुन कसले कति लगायो भनेर हेर्ने दिन हैन अवका दिनमा हामीले नयाँ के कस्ता कुराहरु दिएर समाजलाई विकृति र विसंगतिबाट उन्मुक्ति दिलाउन सक्छौं त्यो कुरामा ध्यान दिनसक्नु पर्छ ।
सुन लगाउदैमा कोही नि ठूलो हुँदैन र सुन नलगाउदैमा कोही नि सानो हुँदैन भन्ने कुरामा पूर्ण रुपमा विश्वस्त रहनु पर्छ । र हाम्रो समाजमा न्यून वर्गका मानिसहरुले चाहि केही मात्रामा जोरजाम गरेर सुन लगायो भने पनि पित्तल लगाएको देख्ने र धनीमानी भनेर आफूलाई बहुत प्रतिष्ठित मान्नेहरुले चाहि पित्तल लगाएनि सुन देख्ने यो पक्षपाति समाजको हेर्ने आँखा हैन सोच्ने मन फेरिन जरुरी छ ।
सुन विना जीवन चल्छ तर नून विना जीवन चल्दैन । मानिसले घुमन्ते जीवन त्यागेपछि नूनको प्रयोग गर्न थालेको पाइन्छ । विशेष गरेर खेतीपातीको युगमा प्रवेश गरेपछि मानव जीवनमा नून अभिन्न अंग बन्न पुगेको देखिन्छ ।
प्राचीनकालमा र रोमनकालमा सैनिक वा अफिसरहरुलाई तलबको साटोमा नून नै दिने गरिन्थ्यो त्यस कारण पनि नूनको महत्व धेरै नै भएको हो । अंग्रेजी Salary शव्द नै ल्याटिन शव्द Saltबाट आएको हो । त्यसैले नूनको अत्यन्तै महत्व छ र सुन जस्तो नूनको भाउ नबढोस् सम्पूर्ण नेपालीहरुको दैनिक जीवनमा आवश्क मानिने नूनले नै हरेक नेपालीहरुको गुजारा चलाईरहेको छ । सूनलाई हैन नूनलाई महत्व दिऊ ।
TAG#shanti basnet Goold